UGoogle ususa amakhonkco angama-2.500 ezigidi kukhuphelo olungekho mthethweni, ngokwaneleyo? | Iindaba zeGajethi
UGoogle ususa amakhonkco angama-2.500 ezigidi ukhuphelo olungekho mthethweni, ngokwaneleyo?
Kude kube yiminyaka embalwa edlulileyo, ukhuphelo lweemovie, uthotho, amaxwebhu, umculo, iincwadi kunye nazo zonke iintlobo zomxholo obunamalungelo obunini kodwa ngaphandle kokungena ebhokisini yayisisiqhelo njengesiqhelo njengemihla ngemihla. Ukuhlawulela imovie kwakuphantse "kwabubudenge." Kutheni uhlawula ukuba unayo mahala kwi-intanethi? Yayiyinkcubeko ye iyonke isimahla apho ishishini, kunye nenxalenye enkulu yoorhulumente, bema kuyo. Kodwa ukuze le mfazwe isebenze, indima kaGoogle njengeyona injini yokukhangela ibaluleke kakhulu.
Ke, yonke imihla uGoogle uya kwizicelo zokucima amakhonkco kumxholo wepiriti, emke ekususeni amawaka amakhonkco kwizigidi zemihla ngemihla. Le yindlela efikelele ngayo kwinani lerekhodi, Amakhonkco angama-2.500 ezigidi okhutshelo olungekho mthethweni lucinyiwe Nangona kunjalo, eli nani alibonakali lanele kwabo balawula ilungelo lobunikazi, abatyhola isigebenga ngokungangqinelani koku.
Umlo wokukhutshelwa ngokungekho mthethweni
Njengoko sifundile thuba, kwingxelo yayo yokugqibela elubala uGoogle ukwazisile oko ucime amakhonkco ayi-2.500 ezigidigidi kumaphepha okhuphelo asemthethweni, eyaziwa ngokuba yi "pirate downloads". Ezi ntshukumo ziphendula kwizicelo ezifunyanwa yinkampani yonke imihla ngenxa yokunyhashwa kwamalungelo obunini kunye nelungelo lokushicilela. Eli nani liyi-astronomical, ngakumbi ukuba sicinga ukuba ukusebenza kukaGoogle sele kufikile kuma-90%, oko kukuthi, UGoogle ukhonza izicelo ezili-9 kwezili-10 ezifunyanwa yonke imihla, ebonisa ukuba yinkqubo efanelekileyo, nangona ayinguye wonke umntu ocinga ngokufanayo.
Abo banoxanduva lokulawula amalungelo okushicilela batyhola inkampani ngokungazami ngokwaneleyo, ngokungayenzi yonke into enokuyenza ukulwa nokukhutshelwa kwabaphangi. Ngokukodwa, la maziko athi amakhonkco amaninzi asuswe nguGoogle avela kwakhona phantsi kweedilesi ezintsha (Ii-URLs), ke uGoogle kufuneka, ngokutsho kwaba baphathi, agcine umlo osebenza ngakumbi ukugcina ishishini likhuselekile.
Phezulu kweenkonzo zokubamba ukuba amakhonkco amaninzi asusiwe I4sha ngezidibanisi ezingama-64 ezigidi; Bayalandelwa kule odolo nge mp3toys.xyz, ngokukhawulezagator.net, layisha.net kunye chomikuj.pl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UGoogle ususa amakhonkco angama-2.500 ezigidi ukhuphelo olungekho mthethweni, ngokwaneleyo?
U-Antonio Morales obambe umfanekiso sitsho
Akwanelanga ngokoluvo lwam, inyani kukuba ekuhambeni kwexesha akusayi kubakho buqhetseba beemovie kunye nomdlalo bhanyabhanya, kuba amaxabiso abo aye esihla asezantsi, njengeNETFLIX, HBO, njl. Yintoni enokunceda iinkampani ezininzi zenze uthotho kunye neemovie.
Phendula ku-Antonio Morales
UAndres Cazaux sitsho
Ndicebisa ukuba iinkampani kunye noorhulumente waseArgentina behlise amaxabiso emiboniso bhanyabhanya kunye nomculo, ukuze abantu bakwazi ukuzithenga ezo bhanyabhanya okanye baziqeshise, endaweni yokuphanga ... Kodwa ngenxa yoko kufuneka behlise amaxabiso ezi mveliso okanye urhulumente waseArgentina ukunyusa umvuzo womntu wonke ukuze sikwazi ukuzithenga amaxesha ngamaxesha kwaye singazenzi idini ukuzithenga… Kwenzeka into efanayo ngamavidiyo evidiyo… Yenza amanani… Cinga ngathi singabemi kwaye ucime amakhonkco eepirate… Slds.
Phendula u-Andrés Cazaux
UNokia noCarl Zeiss baxhawulana kwakhona emva kweminyaka
Iris, iiglasi zokudlala esizifumana kwiNewskill.